प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीहरुज्यूहरु दुई तिहाईको सरकारको जनताले महशुस कहिले गर्ने ? - Rajmarga
प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीहरुज्यूहरु दुई तिहाईको सरकारको जनताले महशुस कहिले गर्ने ?
बन, श्रम, उर्जा, पर्यटन, खेलकुद, युवा, महिला, बालबालिा लगायतका मन्त्रीहरु अचानक हराए । मन्त्रीहरुको भूमिका क्वार्टर क्वारेन्टाइनमा सीमित भयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्पष्ट भिजनको अभाव देखियो । संरचनाले काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्दा गर्दै पनि मन्त्रीको भूमिकाले विषयवस्तुलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गरेको देखियो ।
परराष्ट्र त मानौं छैन नै भन्ने देखियो । जबकि यो संकटमा परराष्ट्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो ।
चीनमा संक्रमणले तीब्रता लिएपछि राष्ट्रपति शी जिनपिङ र अन्य मन्त्रीहरुले जनतामा हौसला जगाउन, स्थानीय जनतालाई राहत दिन, जनताका बीचमा समन्वयकारी ढंगले अघि बढन् पार्टी पंक्ति र सरकारका सबै निकायलाई सक्रिय बनाए । शी आफै सबै जसो प्रभावित स्थानमा पुगेर अवस्थाको निरिक्षण गरे । अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिका लागि व्यवस्था गरे । कुनै पनि जनताले भोको बस्नु परेन । जनता घरमा हुँदा समेत उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै त्यहाँ कार्यक्रम अघि बढे । सबैको सहमति, सबैको सहकार्य, सबैको सामूहिक अभियानले अन्ततः चीन यो महामारीविरुद्ध लड्न सफल बन्यो ।
Previous post: गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण नागरिकलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध
Next post: कोरोनाभाइरसः लन्डनमा कोभिड-१९ बाट निको भइन् नेपाली महिला, यस्तो छ सुझाव